Yini i-RCS futhi isinikeza ini | Izindaba zamagajethi
Yini i-RCS futhi isisinikeza ini
U-Ignacio Sala | | AmaSelula, Izifundiswa
Ngaphambi kokufika kwezicelo zokuthumela imiyalezo nge-inthanethi, i-SMS kwakuyiyona ndlela kuphela yokuthumela imiyalezo kwezinye izinombolo zocingo, imiyalezo ebinezindleko nokuthi zazingabizi kakhulu. Ngokushesha ngemuva kwalokho, kwafika i-MMS, imiyalezo esingayihambisa nezithombe ezinamanani entengo ahlukumezayo.
Ngokufika kweWhatsApp, opharetha babone ingxenye enkulu yemali yabo iwa. Njengoba iminyaka yayihamba, futhi ama-smartphones ayesebenzisa amafoni, ukusetshenziswa kwe-SMS kwehliswe kwaba ngu-zero. Okuwukuphela kokunye okutholwe ngo-opharetha ukwethula ipulatifomu yokuthumela imiyalezo ukusebenza kwayo kufane ne-WhatsApp.
Akunakuphikwa ukuthi lolu hlelo lokusebenza aluzange lubonwe emakethe futhi lwanqanyulwa ngokushesha ngabasebenza kulo. Njengoba iminyaka iqhubeka, izicelo eziningi zemiyalezo ezifana neTelegram, Line, Viber, WeChat, Signal, Messenger, Skype zifikile ... O-opharetha babephonsa ithawula futhi babengenayo intshisekelo yokunikeza enye indlela ehambisana nesicelo.
1 Umsuka we-RCS
2 Isebenza kanjani i-RCS
3 Lokho kuyanikeza
4 Ungayivumela kanjani noma uyikhubaze kanjani imiyalezo ye-RCS
Kuze kwaba ngo-2016 (i-WhatsApp yethulwa ngo-2009 nge-iOS nango-2010 ku-Android yize ingazange idume kuze kube ngu-2012) lapho, ngaphakathi kohlaka lwe-MWC, abasebenza ngocingo abaphambili bememezela isivumelwano neGoogle nabakhiqizi abaningana be-smartphone ukuthi sebenzisa okujwayelekile. Rmina Culwazi Service (RCS) nokuthi yabizelwa lokho ube ngumlandeli weSMS (Insizakalo Yemiyalezo Emifushane).
Ukuba ngumlandeli wemvelo we-SMS, le protocol entsha ibinenjongo yokusebenza ngohlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo ngomdabu, ngakho-ke bekungeke kudingeke ukufaka uhlelo oluthile lomuntu wesithathu, ngakho-ke, imilayezo ingathunyelwa kunoma iyiphi inombolo yocingo ngaphandle komamukeli odinga ukuba nohlelo oluthile, njenge-WhatsApp, Telegram, Viber ...
Ukuba yinsizakalo yokuxhumana ecebile (i-Rich Communication Service translation free) ngaphezu kokuthumela umbhalo, nakho kuzosivumela thumela amafayela anoma yiluphi uhlobo, kungaba izithombe, amavidiyo, imisindo noma yiluphi uhlobo lwefayela. Njengoba bengadingi isicelo esithile, wonke amatheminali kuzodingeka ahambisane nale nsizakalo, yingakho-ke bekudingeka ukuthi ama-opharetha nabakhiqizi bokugcina bavume ukubamba iqhaza kule projekthi entsha ngoba kuzodingeka banikeze ukuxhaswa kwe-RCS ngolimi lwakho ukuthumela imiyalezo izinhlelo zakho zokuphatha imiyalezo yakho yombhalo.
I-Microsoft ne-Google Futhi babeyingxenye yesivumelwano esidingekayo ukuze bakwazi ukunikeza lobu buchwepheshe obusha, kungokugcina ngenxa yezizathu ezisobala ngoba wonke ama-smartphone eza emakethe nge-Android angaphansi kwesambulela sawo. I-Google izobuye ibe nesibopho sokuqalisa uhlelo lokusebenza lomlayezo kuyo yonke i-ecosystem ye-Android engasebenzisa le protocol entsha uma umenzi wayo engakwenzi lokho ngokwendabuko. I-Apple ayikaze iyisekele le nsizakalo entsha futhi okwamanje kubonakala sengathi okwamanje ayihlosile ukwenza kanjalo.
Isebenza kanjani i-RCS
Ukwesekwa kwe-RCS ngabakhiqizi kuqale ngemuva nje kokumenyezelwa kwesivumelwano ngababambiqhaza abakhulu. Ama-opharetha nawo aqala ukwamukela le protocol entsha, kepha akekho owayelandela umzila owawumakwe ngaphambilini futhi kungekudala ngemuva kwalokho, bathole ukuthi eminye imisebenzi iyahambisana nabanye opharetha nabakhiqizi bama-smartphone, kepha hhayi nabanye opharetha.
Ngenhlanhla, konke kwashintsha lapho iGoogle ithatha inkunzi ngezimpondo futhi yathembisa ukuthi izokwethula uhlelo lwe-Android, uhlelo lokusebenza noma yimuphi umsebenzisi angalufaka kudivayisi yakhe, kungakhathalekile ukuthi ngubani owakhiqizayo, ukuze asebenzise imilayezo yombhalo ecebile. Lolu hlelo, setha uchungechunge lwemithetho ukuthi bobabili abakhiqizi nama-opharetha we-smartphone bekufanele bathobele nokuthi umsebenzisi akahlangabezananga nezinkinga zokungahambelani.
Ngo-Mashi 2020, i-Google ivuselele uhlelo lokusebenza lwemilayezo olutholakala ku-Google Play Isitolo, ukunika ukusekelwa kwe-RCS. Ukuze kusizakale le protocol entsha, kwakudingeka ukuthi inkampani enkulu yokucinga ngaphambili ifinyelele esivumelwaneni nabasebenza kakhulu, isivumelwano esivele senziwe ngokusemthethweni okungenani phakathi kwezintathu ezinkulu eSpain ezifana neMovistar, Orange neVodafone.
Umthuthukisi: I-Google LLC
Ukuze ukwazi ukusebenzisa le protocol, kuyadingeka ukuthi womabili amatheminali, womthumeli nowemukelayo, ziyahambisana nale protocolNgaphandle kwalokho, umamukeli uzothola umyalezo wombhalo ojwayelekile ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokuqukethwe kwe-multimedia, umyalezo ozoba nezindleko zomthumeli, ngokwesivumelwano asenzile nomphathi wayo. Iphrothokholi ye-RCS ikhululekile ngokuphelele ngokungafani ne-SMS yendabuko.
Kokubili uhlelo lokusebenza lwe-Google Messages kanye nalolo olunikezwa abakhiqizi abahlukene luthola ngokuzenzakalela ukuthi obani koxhumana nabo asebavele bane-RCS. Sazi kanjani? Kulula kakhulu. Lapho sithumela umyalezo, kufanele sichofoze kukhiye wokuthumela, otholakala ngakwesokunene sebhokisi lombhalo. Uma ingekho inganekwane evela ngezansi kwalowo mcibisholo, umamukeli womyalezo wethu uzothola umyalezo ophelele we-multimedia.
Uma umamukeli womyalezo engenziwanga lo msebenzi, kungaba nge-opharetha yabo noma ngomenzi we-smartphone yabo, Kuzovela i-SMS uma sithumela umbhalo kuphela.
noma i-MMS uma sithumela noma yiluphi uhlobo lwefayela le-multimedia.
Ngale protocol entsha singathumela noma yiluphi uhlobo lwefayela, kungaba yimifanekiso, amavidiyo, amafayela alalelwayo, ama-GIF, izitika, izithonjana, ukudala amaqembu, wabelane ngendawo, sabelana ngoxhumana nabo abasuka ku-ajenda ... konke lokhu ngomkhawulo omkhulu ongu-10 MB. Mayelana namakholi wevidiyo, lokhu kungenzeka kubhekwe nakho, kepha okwamanje akutholakali.
Njengoba sikwazi ukubona, le protocol isinikeza izinzuzo ezifanayo njenganoma yiluphi uhlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo. Ngaphandle kwalokho, futhi amakhompyutha namaphilisi ayatholakala, ngakho-ke sizokwazi ukuba nezingxoxo nabangane nemindeni yethu sengathi sikwenza ngqo kusuka ku-smartphone yethu.
Ungayivumela kanjani noma uyikhubaze kanjani imiyalezo ye-RCS
Ngokushesha nje lapho ufaka inguqulo ye-Android etholakala ku-Google Play Isitolo, umthetho olandelwayo we-RCS uzolunga ukuze sikwazi ukuyisebenzisa, ngoba yenziwe yasebenza ngokwendabuko. Uma sifuna ukuyivimba, kufanele senze lezi zinyathelo ezilandelayo:
Sifinyelela isicelo Imilayezo.
Chofoza amaphuzu amathathu atholakala phezulu ekhoneni eliphezulu lesicelo bese uchofoza Izilungiselelo.
Ngaphakathi Izilungiselelo, singena kwimenyu Imisebenzi yengxoxo.
Kule menyu, uma i-opharetha yethu isekela i-RCS, igama elithi Isimo lizokhonjiswa Kuxhunyiwe. Uma kungenjalo, kusho ukuthi opharetha wethu wezingcingo ayinikezi ukuxhaswa okwamanje noma kufanele ubabize ukuze uyisebenzise.
Ukuyenza ingasebenzi, kufanele sicishe inkinobho ngegama Nika amandla izici zengxoxo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Yini i-RCS futhi isisinikeza ini
Ngisasebenzisa iSMS. "Okungenamkhawulo" kufakiwe kuningi lokunikezwa kokuhlangana kwama-opharetha amakhulu (i-Orange + € 1 inyanga). Angiziboni izinzuzo kuWsapp futhi uma kukhona okubi.
Ungazithumela kanjani izithombe ze-panoramic ezingenamthungo ku-Instagram
Umhlahlandlela Wasekhaya Oxhumekile: Izesekeli ezihamba phambili